Sokkuram, Sokpulsa, Seokguram Grotto - Gyeongju
Asia Korea Atsimo Gyeongju
Adiresy: Jinhyeon-dong, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, Korea Atsimo
Phone: +82 54-745-6835
Ny ampahany sasany amin'ireo mpizahatany, mitsangatsangana any Korea Atsimo , dia mitsidika ny lafy tsarany ho an'ny fanahy isan-taona. Ny harena nasionalin'ny firenena - tempolin'i Boddhista any Pulgux dia toerana manan-danja sy malaza ho an'ireo mpitety fiangonana. Ny iray amin'ireo faritra miafina indrindra amin'izany dia ny fikarakarana tsara an'i Sokkuram.
Famaritana momba ny zohy
Sokkuram dia tempoly tena izy eo amin'ny vatolampy. Farany dia eo atsinanan'ny tempolin'i Boddista mainty izy io, manodidina ny 4 km eo amin'ny Tendrombohitra Thohamsan. Ny vatan'ny vato dia eo amin'ny 750 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina ary afaka miditra amin'ny ranon'ny Ranomasin'i Japon. Ny anaran-tsarin'ny grotto, araka ny tantara ara-tantara, dia ny Sokpulsa, izay amin'ny teny koreanina dia midika hoe "tempolin'ny vato Bouddha." Ary ny marina dia ny sarivongana masina no fototra sy hairaha anatiny.
Milaza ny mpahay tantara fa ny fanorenana ny tempoly dia notarihina tamin'ny 742 ka hatramin'ny 774, nandritra ny fanjakan'ny Sille. Ny fitaovana sy ny fandravahana ny tempolin'i Sokkuram dia notanterahana teo ambany fifehezan'ny praiminisitra Kim Daxon, saingy talohan'ny nahavitan'ny asa rehetra tsy niainany. Ny gorodana voaravaka dia voatahiry ao amin'ny lisitry ny harena nasionalin'i Korea (toerana faha-24) nanomboka tamin'ny taona 1962, ary hatramin'ny 1995 dia tafiditra tao amin'ny tempolin'i Pulgux sy ny UNESCO World Heritage Site. Amin'izao fotoana izao dia azo jerena amin'ny fitsidihana amin'ny fizahan-tany ny grenady ary mahatonga fifaninanana lehibe ho an'ireo toerana malaza hafa ao amin'ny Repoblikan'i Korea.
Inona no tokony hojerena?
Ny tempolin'ny lava-bato ao Sokkuram dia tranga tsy fahita firy sy tsy manam-paharoa, satria misy vato granite vitsy izay tonga any amin'ny faritra atsimon'i Korea Atsimo.
Grotto dia miresaka an'ohatra momba ny dia mankany amin'ny Nirvana:
Ny lalan'ny pilgrims sy ny mpizahatany dia manomboka eo am-pototry ny Tendrombohitra Tohamsan. Any amin'ny lalana mankany amin'ny fitoerana masina dia azo atao ny miborosy: amin'ny loharano marevaka iray, milomano tsara ny fisotroan-dronono.
Indray mandeha ao amin'ny vato granita, dia hahita ny efitrano lehibe ianao - ny lanitra, fa alohan'izany dia mila mandeha amin'ny "tany" ianao amin'ny alàlan'ny efitrano anoloana sy ny lalantsara.
Ao amin'ny efitrano malalaka any an-danitra ianao dia miarahaba ny sarivongana telo metatra ao Bouddha mipetraka eo amin'ny seza - dia vita amin'ny vato. Ny endri-tsoratry ny lotus dia maneho fiadanana sy filaminana. Ny kômpà rotunda dia 6,84-6,58 metatra ny sakany. Misy valiny 15 manodidina ny Bouddha miaraka amin'ny endrik'ireo andriamanitra tranainy indianina, arhat sy bodhisattva. Ampitao ny tsangambato misy sarivongana 10 napetraka eo akaikin'ny rindrina.
Nandritra ny fanorenana ny fasika grita, dia nampiasaina ny modely ara-javakanto ny fizarana volamena. Ny sisin'ny tempolin'i Sokkuram dia voaravaka amin'ny voninkazo lotus, izay ahafahanao mahita koa ravintsara.
Tahaka ireo zavatra tranainy fahiny tao amin'ny lova ara-pivavahana tany Korea Atsimo, dia naverina naverina naverina tamin'ny laoniny sy naverina tamin'ny laoniny ny fakana volkano sokuram. Noho izany dia mbola tsy fantatra ny drafitra marina momba ny dikan-teny voalohany amin'ny tempoly. Misy fikarohana ara-tsiantifika sy fikarohana ambanin'ny tany. Amin'izao fotoana izao, ny tranobe anatiny manontolo dia voahodina amin'ny mpitsidika amin'ny fitaratra. Noho ny fanajana ny toerana masina dia nangataka ny mpizaha tany tsy handray sary sy lahatsary.
Ahoana ny hahatongavana any Sokkuram?
Alohan'ny hanatontosana ny tempolin'i Bulguks, afaka miditra ao amin'ny bus na taxi ao an-tanàna ianao, ary eo amin'ny sisin'ny Sokkuram tsy maintsy mandeha ihany ianao. Afaka manao izany ianao na amin'ny maha-vondrona mpizahatany azy.
Gyeongju State Museum
Ny Tempolin'i Reanjis
Dimy farihy ao Fuji
The Caves of Gomontong
Ireo zohy ao Padalyn
Royal Park Beloom
Taom-baovao ho an'ny sekoly
Ahoana ny fomba hahandroana steak turkey?
Firaisana taorian'ny fiterahana
Salady ravinkazo miaraka amin'ny tongolo lay sy ny mayonnaise - tsotsotra tsotra sy mahazatra amin'ny sakafo isan'andro
Ny telo ampahatelon'ny vehivavy bevohoka - inona no azonao atao?
Tsara sy ratsy ny sôkôla
Tavoahangy milete ao amin'ny multifariate
Ankizivavy kardinaly: Takelaka 35 ho an'ny ray aman-dreny sy zanaka!
Tranobe ho an'ny dachas - fanaka amin'ny fialana aina
Maddox nandà tsy hihaona tamin'i Brad Pitt
Mangatsiaka mandritra ny fitondrana vohoka - 3 trimès
Ny fiheverana ny fiaraha-mikorana
Boky papango vita amin'ny lamba - lamina sy kilasy master
Ahoana ny fomba hiarahanao amin'ny namanao?
Inona no fampiasa amin'ny vary orza?
15 herinandro ny fitondrana vohoka - inona no mitranga?
Tandindonin-doza mahasamihazo - hevitra momba ny fanavaozana
Ahoana ny fomba hanafoanana ny gripa ao amin'ny firenena?
Volo mainty volo
Kitapo misy tanana manokana avy amin'ny takelaka fanaka
Mora haingana ny mavesatra aorian'ny fiterahana, raha mihinana ianao?